Qoysaska ajaanibta ku nool Ruushka ayaa hadda soo geli kara waddanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Qoysaska ajaanibta ku nool Ruushka ayaa hadda soo geli kara waddanka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Qoysaska ajaanibta ku nool Ruushka ayaa hadda soo geli kara waddanka.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa ku dhawaaqday in gelitaanka dalka la siin doono marka la soo bandhigo nuqul ka mid ah dukumintiga xaqiijinaya xaaladda qaraabanimo, sida shahaadada guurka, shahaadada dhalashada iyo dukumiintiyo kale ama sameynta mas'uuliyadda ama wakiilka.
Mamnuucidda ka-hortagga COVID-19 ee gelitaanka dhulka Ruushka mar dambe ma khuseeyo xubnaha qoyska ee muwaadiniinta ajnabiga ah iyo dadka bilaa waddanka ah ee sida joogtada ah u deggan Ruushka.
Hadda ka hor, kaliya xubnaha qoyska ee muwaadiniinta Ruushka ayaa fursad u helay inay galaan Ruushka.
Isbeddelkan waxaa bilaabay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ka dib natiijooyinkii rafcaanno badan.
Waaxda Qunsuliyada ee Ruushka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa lagu shaaciyay kanaalkeeda Telegram maanta, in xannibaadda la xiriirta COVID-19 ee horay loogu soo rogay gelitaanka Ruushka ayaa loo qaaday xubnaha qoyska ee muwaadiniinta ajnabiga ah iyo dadka bilaa waddanka ah ee sida joogtada ah u deggan waddanka.
Mamnuucidda ka-hortagga COVID-19 ee gelitaanka dhulka Ruushka mar dambe ma khuseyso xubnaha qoyska ee muwaadiniinta shisheeyaha ah iyo dadka bilaa waddanka ah ee sida joogtada ah u deggan Russia (taasi waa, haysashada oggolaanshaha joogitaanka ee Ruushka). Xubnaha qoysku waxay ka kooban yihiin lammaane, waalid, carruur, walaalo, ayeeyo, ayeeyo, ayeeyo, waalid korsaday, carruur korsatay, mas'uul iyo wakiil, ”ayaa lagu yiri farriinta Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ruushka.
The Wasaaradda Dibadda cayimay gelitaanka dadka la sheegay Russia waxaa suurtogal ah marka la soo bandhigo nuqul ka mid ah dukumintiga xaqiijinaya xaaladda qaraabanimo, sida shahaadada guurka, shahaadada dhalashada iyo dukumiintiyo kale ama aasaaska mas'uuliyadda ama wakiilka.
“Haddii ay dhacdo in la waayo heshiis safar fiiso la’aan ah oo u dhexeeya xaaladda muwaadinnimada qaraabada iyo Xiriirka Ruushka, qofka samaynaya martiqaadka, oo kiiskan ah shisheeye si joogto ah u deggan Russia, waa in uu ka codsadaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Ruushka si uu u soo saaro casuumad, taas oo saldhig u noqon doonta in xafiiska Qunsuliyadda Ruushku u helo fiiso gaar ah oo loogu talagalay qaraabadiisa, ”ayay tiri Wasaaradda Arrimaha Dibadda.
Sida laga soo xigtay Waaxda Qunsuliyadda, shaqada ku aaddan wax ka beddelka ku habboon ee wareegtada Dowladda Federaalka ee ku taariikhaysan Maarso 16, 2020 waxaa bilaabay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Ruushka ka dib natiijooyinka rafcaanno badan, oo ay ku jiraan shabakadaha bulshada ee ajaanibta sida joogtada ah u deggan Ruushka, iyo waliba qaraabadooda dhow.
Wasaaraddu waxay intaas ku dartay in intaas ka hor kaliya xubnaha qoyska ee muwaadiniinta Ruushku ay fursad u heleen inay galaan Ruushka oo qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah cudurka faafa ee coronavirus.